Efa Nandre Momba Ny “Vola Ho An’ny Fanalahidy” Ve Ianareo? Maro Amin’Ny Mpifindra Monina Efa Zokiolona Any Los Angeles No Nahazo – Ary Miady Amin’Izany · Global Voices teny Malagasy
Efa Nandre Momba Ny “Vola Ho An'ny Fanalahidy” Ve Ianareo? Maro Amin'Ny Mpifindra Monina Efa Zokiolona Any Los Angeles No Nahazo – Ary Miady Amin'Izany
Voadika ny 16 Jona 2017 11:23 GMT
Vakio amin'ny teny Português, polski, Español, English
Nasaina nandao ny efitrano fonenany anatinà tranobe iray fanofàna efitrano tokana ao Los Angeles i Yue Chang Zhou sy ny vadiny rehefa namidy izany tamin'ny herintaona. Noho ny hakelin'ny karama raisiny, tsy inoana ny ahitan'izy ireo trano hofaina amin'ny vidiny mora ao Los Angeles, ary mety haharitra taona maro ny fiandrasana ny valin'ny fangatahana famatsiana trano fonenana ho an'ny zokiolona. Tompon'ny sary: Roberto Guerra/PRI
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 15 Mey 2017 ity lahatsoratr'i Ruxandra Guidi ity. Averina avoaka eto izy io ho ampahany amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Vetivety dia miakatra ny hofantrano any amin'ireo tanàna manodidina an'i Etazonia.
Manova ireo faritra an-tanàndehibe any amin'ireo toerana maro ao amin'ny firenena ny fipoahan'ny teknolojia sy ny fiakaran'ny hofantrano, mampiakatra ny vidim-piainana ary manery ireo mponina kely karama handao ny fonenany hatrizay. Anisan'ny maro voakasik'izany ireo zokiolona mpifindra monina, toa an'i Ying Ya Yang, 86 taona, izay nipetraka tanaty efitra iray mirefy eo amin'ny sivy metatra toradroa monja.
Nandritra ny 15 taona mahery no natoriany, nandrahoany sakafo sy nisakafoanany tao amin'io efitrano kely sady tery io. Nefa milaza izy fa toy izany no itiavany azy.
Mpiasanà orinasa mpanjaitra efa misotro ronono avy any Shina i Yang, miankina amin'ny karama fanampiny 800 Dolara isam-bolana i Yang, ary mahalala tsara izy fa ho sarotra ho azy ny hahita trano moramora kokoa na dia eto Linkoln Heights aza, faritra ipetrahan'ny mpiasa mifindra monina akaikin'i renivohitr'i Los Angeles.
“Tena mahaleo tena sy mahavita tena aho”, hoy izy”. “Manome vola ahy ny zanako fa tsy raisiko izany, tiako ny mikarakara ny tenako. Tiako koa ny miaina eto satria mahafinaritra ahy eto: afaka mandray fiara fitateram-bahoaka n'aiza n'aiza aho. Afaka miteny aho hoe eto aho no te hipetraka mandra-pahatongan'ny faran'ny andro iainako.”
Indray andro tamin'ny fararano teo, na izany aza, nisy vahiny tsy nampoizina nitsidika i Yang sy ny mpiray vodirindrina aminy, ny fianakaviana Zhou: vondrona mpisolo vava momba ny trano fonenana miteny kantoney. Hita ho tena tohina i Yue Chang Zhou raha nanazava tamin'ireto farany ny toerana misy azy.
“Tonga teto ry zareo ary niteny manokana taminay hoe: “mila mifindra trano ianareo afaka 6 na 7 volana, homenay hofan-trano enim-bolana ianareo dia afaka mandeha”
Mety ho ilay tompon-trano vaovao angamba no notondroin'i Zhou tamin'ilay “ry zareo”. Raha ny marina tsy mbola hitany mihitsy izy io, fa efa naheno tamin'ny mpiara monina aminy teo aloha izy fa tian'ny tompon-trano ampiasaina amin'ny zavatra hafa ny tranony. Nandray ny hofan-trano enim-bolana — izay mitentina any amin'ny 2400 Dolaraany ho any–ireo mpiara-monina tanora kokoa ary niala.
Fa na ohatrinona na ohatrinona dia tsy hamoizan-dry Zhou na i Yang izao fomba fiainany izao. Ary ity valinteny avy amin'ny zokiolona ity dia efa mahazatra.
“Ny ankamaroan'ny zokiolona dia te ho antitra sy maty ao amin'ny traony”, hoy Phyllis Chiu, mpampianatra iray efa misotro ronono izay izay mpiasa an-tsitrapo ao amin'ny toeran'ny mpifindra monina toa an'i Lincoln Heights sy China Town ao Los Angelse, miasa miaraka amin'ny vondrona antsona hoe Vondrom-piarahamonina Chinatown ho an'ny Fampandrosoana Ara-drariny. Vondronà mpilatsaka an-tsitrapo izay mitety trano sy miresaka amin'ireo mipetraka ao amin'ny fitenim-pireneny momba ny zon'izy ireo amin'ny fanànana trano izy io.
Phyllis ChiumMipsolo vava momba ny trano fonenana miteny Kantoney manampy ireo mpanofa trano miatrika fandroahana ao amin'ny trano lehibe ao afovoan'ny tanànan'i Los Angeles. Efa zokiolona daholo ny akamaroan'ireo mpifindra monina iarahan'i Chiu miasa.
Sary: Roberto Guerra
“Tsy te ho faty any amin'ny hopitaly izy ireo, tsy te ho faty any amin'ny trano fistroan-dronono izy ireo. Ary tsy te ho voatery hifindra toerana izy ireo”. Hoy Chiu.
Ao anaty fivoarana ny afovoan'ny tanànan'i Los Angeles, ahitana trano fonenana itambaram-be sy trano fisakafoana vaovao misokatra. Fa mampiakatra ny vidim-piainana eny amin'ny faritra misy foko miara miaina izay ahitana mpifindra monina nanomboka nipetraka teo hatramin'ny taona 1950 sy 1960 ny fiitarana.
Araka ny filazan'i Chiu, maro ireo olona tiany hampiana no Amerikana avy any Azia izay matahotra hifanandrina amin'ny fitantanana, indrindra moa fa amin'ny teny anglisy. Tsy miady akory, dia nafindra monina izy ireo.
Velom-panahiana momba ireo nafindra monina amin'izao fotoana izao i Steven Wallace, avy ao amin'ny Foibem-pikarohana Momba ny Politikan'ny Fahasalamana an'ny UCLA. Antsoiny hoe “mahantra miafina” izy ireo — olona izay mandray karama mihoatra ny haavon'ny fahantrana federaly ofisialy, fa sahirana vao mahatafita ny faran'ny volana.
Any LA, tombanana ho zokiolona 200.000 amin'izao fotoana izao no latsaka ao amin'io sokajy io, ary matetika dia Latina, Afrikana, Amerikana ary olon-dehibe Aziatika izay miaina irery na irery miaraka amin'ny vadiny izy ireny.
“Tany amin'ny taona 30, nanorina vondronà trano fonenana ara-tsosialy an-tapitrisany nanerana ny firenena izahay. Tany amin'ny taona 60, nisy fizarana 202, izay nanorina trano maromaro ho ana zokiolona”, hoy Wallace. “Ankehitriny, sarotra ny mahazo famatsim-bola, na dia fikambanana tsy mitady tombon-tsoa aza ianao ary te hanorina trano fonenana mihofa mora, toeram-ponenana misy mpamatsy vola, toeram-ponenana ho an'ny be antitra. Noho izany zavatra maro no mbola tokony atao.
Tokony hitohy ny fiakaran'ny fangatahana toeram-ponenana. Fa na misy an'izay aza, misy fomba fanao iray antsoina hoe “vola ho an'ny fanalahidy”, izay midika indrindra ho fanomezan'ny tompon-trano vola ho an'ireo mpanofa mba ahafahan'izy ireo mifindra trano alohan'ny fetra lazain'ny lalàna.
Trano efatra mona miala eo amin'izay ipetrahan'i Yang sy ny fianakaviana Zhou, misy trano tranainy iray izay tsy misy mipetraka ny ampahany. Anisan'ireo mpanofa farany, nisy be antitra, toa an'i José Viramontes, 80 taona. Teratany Meksikana, niaina teto niaraka tamin'ny vadiny nandritra ny 36 taona i Viramontes.
Volana vitsy lasa izay, natoninà tompon-tany vaovao iray ireo mpivady. Nangatahany hiala izy ireo. Na dia tsy miteny Anglisy aza izy ireo, nanasonia anontan-taratasy milaza fa nanaiky handray 1.500 Dolara tsirairay izy ireo ary hiala.
Fa nisy mpisolo vava momba ny trano fonenana nandondona tao amin'ny varavaran'izy ireo, ary naniry hanampy azy.
“Fahagagana izany, ilay karazana fahagagana izay tsy hitanay mihitsy ny niaviany,” hoy Viramontes. “Soa ihany, eto izahay, ary amin'izao fotoana izao, tokony hitady trano vaovao fotsiny izahay”.
Nahita mpisolo vava nilatsaka an-tsitra-po hiaro azy eo anoloan'ny fitsarana i Viramontes. Manambara izy ireo fa tsy ara-dalàna ny fandroahana azy ireo ary manao fangatahana izy ireo mba ahazaoany an'arivony dolara hanampy azy amin'ny fifindrana — maherin'ny 20000 Dolara. Nefa tsy mora ny hahitana trano mora. Jamba i Viramontes ary ny vadiny, Malena, dia manana fahasembanana ara-batana.
“Ny hany hevitra farany, raha tsy afaka ny hijanona eto Los Angeles izahay, ho any atsimo izahay any Tijuana. Satria lasa lafo loatra ny eto,” hoy Viramontes.
Afaka naely ny tantaran'i Ruxandra Guidi tamin'ny alalan'ny fanohanan'ny Fikambanan'i Eisner sy ny KCRW.
1 andro izayKanadà